You are here: Home Home Garbihii arradnaa in kastoo, badankood asturmeen, haddana? Hargeysa, 13/8/2013ka,
Garbihii arradnaa in kastoo, badankood asturmeen, haddana?
Waa in ay xukuumadduu wixii gunno iyo xuquuq kale darajada raaci lahaa dhakhso u bixisaa, haddii kale darajo-bixintii ayaa macno beelaysa. Weliba wasaaradda maaliyaddu waa in ay ka dedaashaa in ay ciidammadaasi xuquuqdooda helaan. Yeynaan arkin Janan ama sarkaal sare oo budulka ku asqoobay, afar-qaadka socodka, illeyn ciyaalkan yar yar ee Kastammada joogaaba ma lugeeyaan e’,
Waa in ay saraakiisha iyo guud ahaan ciidammaduba isu dhigaan ciidammo anshax iyo akhlaaq leh. Darajooyinka lagu talay waa in ay abaalkooda mariyaan oo aanay meel baas iyo reero muskood la fadhiisan oo mijin jaad ah suuqa la meeraysan,
Inta cabanaysa waa in cabashadooda la dhegaystaa. Waa in la abuuro halkii ay cabashooyinkooda soo marin lahaayeen iyo ciddii go’aanka ka qaadan lahayd. Ma aha in la reereeyo. Ma aha in la beeleeyo. Ma aha in madax-dhaqameedyo ka adeegaan. Ma aha in la urureeyo. Ma aha in siyaasiyiintu la foof-tagto. Waa arrin ciidan ee ha loo daayo qofka cabanayo iyo cidda uu u cabanayo,
Xukuumadda iyo Talisyadu waa in ay iska kaashadaan sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta guud ee ciidammada gaar ahaan saraakiisha si ay u fahmaan xilalkan cusub ee fuulay iyo culayska ka dhalanaya darajadan la siiyay,
Ugu dambaynna dadkayagii waaweynaa waxa nagu batay su’aalihii ku saabsanaa darajooyinka, maxaa yeelay ilaa afartan-jirradu aqoon uma laha darajooyinka mana ay arag. Sidaa awgeed agabka war-baahinta waa in loo mariyaa barnaamajyo loogu sharxayo darajooyinka iyo sooyaalkoodii dheera,